Nri ndị South East kacha dị nma n'ahu - Onye ọkachamara - NDỊ IGBO KWENU
Home / Ahụ ike / Nri ndị South East kacha dị nma n’ahu – Onye ọkachamara
Nri ndị South East kacha dị nma n’ahu – Onye ọkachamara
ndiigbokwenu1 April 11, 2016	Ahụ ike, Featured Comments Off on Nri ndị South East kacha dị nma n’ahu – Onye ọkachamara 825 Views
Otu onye ọkachamara n’ihe gbasara idezi ahu nma na Lagos State University Teaching Hospital, ,Dr. Olufunke Adeniyi, sị na abia n’obodo Naijairia na ọ bụ nri ndị South East kacha dị nma n’ahu ma tọọ ụtọ. O kwuru nke a na otu mmeme ndị Nestle Nigeria na Lagos haziri ikparita ụka n’okwu gbasara ọrịa na oriri na-edozi ahu.
Adeniyi sị na Ofe ndị igbo kasi nma n’ahu maka na ọnaghị enwe oke mmanu n’ime ya. Adeniyi sịkwa na ihe mgwa na ụmụakwụkwọ nri ndị South East ji esi nri mere nri ha ka ọ dị ụtọ karịa nri ndị akuku ndị ọzọ na Naijiria. Iri ezigbo nri dị nnọọ mkpa ma ọbụrụ na mmadu chọrọ inwe ike ibi ndụ ahu ike.
Iji maa atu, Adeniyi sị na nne na nna ndị South West kwesiri imelite nri ụmụ ha na-eri ka ọ nwee ụmụihe ga abụrụ umi dịrị ahu ụmụaka ha nile. Onye ọkachamara a sị na ihe kpatara ọtụtụ ụmụaka ji ezuzu-ezuzu ma n’arịa ọrịa bụ ajọ nri ha n’eri. Ọ sịkwa ka ndị nne gbaba mbọ n’enye ụmụaka ha mmiri-ara ahu mmadu hapụ nri dị na mkpọ arụpụtara arụpụta.
Nri Igbo	2016-04-11
Tags Nri Igbo
Previous Kedu ka anyị si rute ebe a?
Next Enyimba FC meriri Etoile du Sahel